Wararka Maanta: Jimco, Sept 24, 2021-Galmudug oo shaacisay in ay faraha ka laabatay waan-waantii ay ka dhex wadeen Farmaajo iyo Rooble
Wasiirka warfaafinta Galmudug, Axmed Shire Falagle, ayaa sheegay in la waayay habo yaraatee wax iskusoo dhawaansho ah, ayna madaxdu isku tanaasuli waayeen si walba oo la isugu dayay.
“Howl ciddii la rabay in ay qaboojiso ay shidayso, si loogu sii dhex jiro oo loo dhex dhexaadiyo way adkaatay,” ayuu yiri wasiirka warfaafinta Galmudug, oo la hadlayay BBC Somali.
Wasiirka ayaa ka gaabsaday inuu tilmaamo darafka uu shirka ka socon waayay ee masuulka ahaa inuu shirku fashilmo, wuxuuna ku gaabsaday in ay cid waliba ogtahay cidda wax ka socon waayeen.
‘Annagu juhdigii iyo waqtigii aan galinay in la heshiiyo way socon waayeen, mar haddii la heshiin waayay oo wixii aan hoggaaminaynay ay burbureen, waxaan caddeynaynaa in aan bannaanka ka taagannahay, “ayuu yiri wasiir Falagle.
Maamulka Koonfur galbeed ayaa sidaas oo kale horay faraha ugala baxay, kaddib markii ay socon waayeen dhex-dhexaadintii ay todobaadkii hore wadeen Lafta gareen iyo Qoorqoor.